Xil-ka-xayuubin mise gole joojin? Akhri sida aysan sax u ahayn in Xil-ka-xayuubin lagu sheego | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Xil-ka-xayuubin mise gole joojin? Akhri sida aysan sax u ahayn in Xil-ka-xayuubin...
Xil-ka-xayuubin mise gole joojin? Akhri sida aysan sax u ahayn in Xil-ka-xayuubin lagu sheego
(Washington, DC) 14 Jan 2021 -MW Maraykanka ee Donald Trump ayaa markii 2-aad la gole joojinayaa taasoo ka dhigaysa ninkii ugu horreeyey ee isaga oo MW ah ay sidaa qabsato, iyadoo lagu haysto inay isaga ka gows haysteen qas wadayaashii ku qamaamay xarunta Koongarayska ee Capitol Hill.
Ilaha warbaahineed ee impeachment xil-ka-qaadis ku micneeyey umadda waxay siinayaan aragti khaldan, sababtu waxay tahay impeachment af Soomaali ahaan waxaa ku habboon Gole Joojin oo qofku sidii wax la maxkamadaynayo ayaa kiis uu sameeyey la xugminayaa, balse taasi kama dhigna in xil laga qaadayo qof kasta oo la gole joojiyo.
Gole joojintu way keeni kartaa in xilka la iska qaado, balse taasi ma aha xaasilka qura ee ka ratibmaya gole joojinta. Clinton ayaa ka mid ahaa madaxdii ugu dambaysey ee la gole joojiyey xilna lagama xayuubin. Trump ayaa laftiisa mar hore la gole joojiyey balse xilkii lagama qaadin.
Tan kale, marka aad xil-ka-xayuubin ku micnayso waxaad ka boodaysaa hal geeddi socod oo waxaad u boodaysaa natiijadii, tusaale, shalay Aqalka Wakiillada ee Koogarayska ayaa u codeeyey gole joojinta 2-aad ee Trump, balse taasi kama dhigna in xilkii laga qaaday, sababtu waxay tahay waa in kiiskiisa la galaa, kaddibna Aqalka kale ee Senet-ka laga helo 2/3 oo u codeeya gole joojinta.
Sidaa darteed, waxaa erayga ugu habbooni noqon karaa gole joojin ama maxkamadayn baarlamaani ah.
Previous articleQaadashada Baasaboorka Sweden oo lagu soo darayo shuruudo cusub (Warbixin muhim ah)
Next articleAC Milan oo heshiis la gaartey Soualiho Meïté (Goorta la filanayo)